Atụmatụ izu ụka na ụmụaka na ezinụlọ | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Iso umuaka eme njem
Na ụmụaka na-eme atụmatụ izu ụka O nwere ike ịdị mgbagwoju anya, karịchaa ebe ọ bụ na anyị ga-ahụ ebe ga-adabara mmadụ niile. Obere umuaka kwesiri ileba anya na ndi okenye, ya na ndi obi uto. Taa, ị nwere ike ịme ọtụtụ atụmatụ na ụmụaka nke ga-abụ naanị ngwụsị izu, ebe anyị nwere ọtụtụ ohere na ozi site na webụ.
na ngwụsị izu na ụmụaka Ha kwesiri inwe obi ụtọ maka ezinụlọ dum. Onye ọ bụla na-emekọ ihe ọnụ, ka a ghara ịhapụ onye ọ bụla. Ọ bụ ya mere ị ga-eji chọọ ahụmịhe na ihe omume dabara na ndụ ezinụlọ.
1 Zọ ụkwụ dị mfe
2 Picikin n'ọhịa
3 Ulo ime obodo maka onye obula
4 Igwe igwe kwụ otu ebe
5 Campbọchị maa ụlọikwuu
6 Gaa na ụlọ ngosi ihe nka
7 Mara obodo gi
8 Chọpụta ihe ụtọ ọhụrụ
Zọ ụkwụ dị mfe
Otu n'ime ihe anyị nwere ike ime na ụmụntakịrị n'oge ngwụsị izu bụ ịchọpụta ụzọ njem na nsogbu siri ike. Dabere na afọ ụmụaka na ụdị anụ ahụ ha, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụfọdụ ụzọ nwere kilomita ole na ole ebe ha ga-anabata obi ha, jiri ike ha wee chọpụta ihe okike. Ijuputa ufodu uzo ndia na ngwụcha izu bu ezigbo echiche, dika odi ntụrụndụ dị mma maka ezinụlọ dum ma n’ezie ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ bụrụ na anyị ejighị n'aka na ọ bụ ụzọ dị mfe maka ụmụaka, anyị nwere ike ibu ụzọ mee ya mbụ, ebe ọ bụ na oge ụfọdụ ha nwere ike toro ogologo ma ọ bụ sie ike n'ihi ala ahụ.
Nke a bụ echiche ọzọ dị mma iji nọrọ ụbọchị pụọ n'ụlọ ma mee ihe dị iche. Anyị nwere ike ịme a ezumike ntụrụndụ ezinụlọ na ime obodo. N’ọtụtụ obodo, e nwere ọbụna nnukwu ubi ndị na-eme ka anyị mee ihe ndị dị otú a n’enweghị ogologo njem. Naanị ị ga-ahazi nri, tinye akwa ákwà akwa ma sie nri dị ụtọ, nke na-aka mma n'èzí mgbe niile. Iji nọrọ n'ehihie anyị nwere ike ibute ụfọdụ egwuregwu bọọlụ maka ezinụlọ anyị niile isonye.
Ulo ime obodo maka onye obula
Enwe a izu ụka n'ụlọ ime obodo Ọ bụghị naanị maka ndị di na nwunye ma ọ bụ ìgwè ndị enyi. Enwere ụlọ ndị dị n'ime ime obodo bụ ezigbo nhọrọ maka ezinụlọ dum. Ọ dị mma ịhọrọ ụlọ nke dịka ọmụmaatụ ha nwere ebe egwuregwu, ma ọ bụ ebe igwu mmiri ma ọ bụrụ na ụmụaka nwere ike igwu mmiri. N'ụzọ dị otú a, a ga-atọ ha ụtọ karị. Na gburugburu ụlọ ndị dị n'ime ime obodo, a na-enwekarị oghere ndị mara mma, yabụ ịme ụzọ, ụkwụ ma ọ bụ ịnyịnya ígwè, nwere ike ịbụ ụzọ ọzọ.
Mee ụdị egwuregwu n'oge izu ụka ọ dị mma maka ezinụlọ dum. Oge ụfọdụ anyị nwere ike ịga mkpagharị ma ndị ọzọ na-agba ịnyịnya igwe. Enwere ebe dị nchebe iji ụzọ ndị a eme njem site na ịnyịnya ígwè, mana anyị ga-achọrịrị ụzọ gasị nke nwere ike ịnweta ma dị mfe maka mmadụ niile. Ọ bụ obere ọrụ dị mgbagwoju anya karị, mana ọ bara uru ma ọ bụrụ na anyị nwere ebe anyị niile nwere ike iji igwe kwụ otu ebe.
Campbọchị maa ụlọikwuu
Ọrụ ọzọ nwere ike ịmasị ụmụaka bụ ịmekọ ụbọchị ịma ụlọikwuu ọnụ. Nke a nwere ike inyere ha aka ịmụta ihe ole na ole, dịka seta ulo-ntu ma nwekwaa ezi okike. Enwere ebe ị ga-ama ụlọikwuu ma ị nwekwara ike ịga ebe obibi anụ ọhịa maka otu ụbọchị, ọ bụ ezie na ọ dịtụ mgbagwoju anya. Iji soro ezinụlọ gị dum gaa, ọ ka mma ịchọ ebe dịka ogige iji nwee ike ịnwe ụfọdụ ọrụ.
Gaa na ụlọ ngosi ihe nka
A pụkwara ime ha nleta omenala na ụmụntakịrịEbe obu na ha ghere oghe iguta akwukwo obula, ha di ka ogwu. Ọ bụrụ na anyị akpọrọ ha gaa na ebe ngosi ihe mgbe ochie, ha ga-enwe ọhụụ dị iche banyere ọrụ ndị ahụ. Anyị nwere ike ịgwa ha gbasara ha ma ọ bụ hapụ ka ha kọwaa nka na ụzọ nke aka ha. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ nhọrọ dị mma ị ga-aga na ebe ngosi nka na ngwụcha izu. N’ọtụtụ n’ime ha, a na-ahazi ihe omume ụmụaka na ndị nkuzi iji kụziere ha nka site na echiche nke ụmụaka.
Mara obodo gi
N'ezie enwere nkuku n’obodo achọpụtabeghị, ma ọ bụ ebe ọhụụ na ihe omume ndị anyị na-abanyebeghị aha ha. N'ime obodo enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ, yabụ anyị nwere ike ime ndepụta nke nleta iji chọpụta na ụmụntakịrị, yana mmemme ndị enwere ike ịme n'oge oge ọ bụla n'obodo iji ghara ịhapụ ihe ọ bụla. Ga-eleba anya n’ihe ntụzịaka oge ezumike n’obodo mepere emepe iji hụ ihe ga-adabara ezinụlọ ahụ dum.
Chọpụta ihe ụtọ ọhụrụ
Ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ezinụlọ hụrụ anyị n’anya nwaa uto ohuruỌ bụ nnukwu echiche ị ga-eji gwuchaa izu ụka achọta ebe ọhụụ iji gbalịa nri dị iche iche. Littlemụntakịrị ga-enwe mmasị iri nri na Japanese na chopstiiki, ma ọ bụ ịchọpụta nri Arab. Nke a na-enyere ha aka ịdị na-emeghekwu maka nri na ụtọ, ịnwale ma nweta ihe ọhụụ na ihe dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Atụmatụ maka izu ụka na ụmụaka
Mad eze nnukwu ụlọ